Abavelisi beMeter yokuSebenza kweMizi-mveliso yaseChina yoQeqeshiso lweMeter yeeFektri kunye nabaxhasi
I-DDG-3080 yokuSebenza kweMitha yokuSebenza
I-DDG-3080 ye-Meter Conductivity Meter sisixhobo esikwinqanaba eliphezulu senkampani yethu exhotyiswe ngemicroprocessor kunye nemenyu yesiNgesi epheleleyo. Inomboniso kunye nemodeli yokusebenza kwemenyu; ibonakaliswe ngokusebenza kwayo okrelekrele, ukusebenza ngemisebenzi emininzi kunye nokulinganisa okuphezulu kunye nokulungelelana kwayo kwendalo. Ingasetyenziselwa ngokubanzi ukubek'esweni kokuqhubeka kwezisombululo ezisetyenziswa kwezi nkalo zilandelayo: isityalo samandla eshushu, isichumisi semichiza, ishishini leekhemikhali, isinyithi, ukhuselo lokusingqongileyo, ukuvelisa ikhemesti, ibhayoloji, ukutya kunye namanzi abalekayo.
I-DDG-2090 yeemitha zokuqhuba izinto
Imitha ye-DDG-2090 ye-Intanethi yokuSebenza kwi-Intanethi iphuhliswa ngesiseko sokuqinisekisa ukusebenza kunye nemisebenzi. Umboniso ocacileyo, ukusebenza okulula kunye nokulinganisa okuphezulu kunika ukusebenza kweendleko eziphezulu. Ingasetyenziselwa ukubek'esweni ngokuqhubekayo kokuqhutywa kwamanzi kunye nesisombululo kwizityalo zamandla ashushu, isichumisi semichiza, isinyithi, ukhuselo lokusingqongileyo, ikhemesti, injineli yemichiza, ukutya, amanzi abalekayo kunye namanye amashishini amaninzi.
I-DDG-2080X yokuSebenza kweShishini kunye ne-TDS kunye ne-Salinity kunye ne-Meter Resistivity Meter
Izixhobo zisetyenziselwa ukulinganisa kwimizi-mveliso iqondo lobushushu, ukuqhuba, ukuhlala kwakhona, ityuwa kunye nokuqina okunyibilikisiweyo, njengokunyanga amanzi amdaka, ukubeka iliso kwindalo esingqongileyo, amanzi acocekileyo, ukulima elwandle, inkqubo yokuvelisa ukutya, njl.
Imitha ye-DDG-2080S yeDijithali yokuSebenza ngokuSebenza